Daawo“Waar Yaynaan Dadkeenna Ku Halleynin Xukuumaddaa Aad Ogtihiin Siday U Isticmaasho Hantida Ummadda…” Sheekh Aadan-Siiro | Saxil News Network
Daawo“Waar Yaynaan Dadkeenna Ku Halleynin Xukuumaddaa Aad Ogtihiin Siday U Isticmaasho Hantida Ummadda…” Sheekh Aadan-Siiro
March 19, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa (Saxilnews) – Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey (Sheekh Aadan-Siiro), ayaa Khudbaddii Jimcaha ee Maanta kaga hadlay Abaarta ka jirta Gobollada Somaliland, waxaanu ku baaqay inaan Dadka Abaartu dhibaateysay inaan lagu halleynin Xukuumadda oo uu sheegay in aanay u dhaqmayn sida Dad ay Abaari ka jirto Dalka ay Masuulka ka yihiin.
Sheekh Aadan-Siiro wuxuu Khudbadda isku barbar-dhigay Hab-dhaqankii Muslimiintii hore ee xilliyada ay jiraan Xaaladaha Adag sida Abaarta iyo siday u dhaqmayso Xukuumadda Somaliland Xilligan ay Dalka ka jirto Abaarta baahsan ee Dad iyo Duunyaba halista gelisay.
Sheekha oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Aafaadka jira Rasuulku wuxuu u samaystay Ummad isku xidhan, oo aan ahayn Nolosha Reer Galbeedku Maanta innagu hoggaamiyaan ee ah inay kooxi noolaato, inta kalena ay Shilimaadka u tuuraan iyagoo Warbaahinta marinaya.”
Sheekhu wuxuu sheegay in Qofka u gargaara Walaalkii oo dhibaataysan uu isagana ILAAHAY u gargaarayo, “ILAAHAY wuu Ag-taagan yahay oo waa Gargaarihiisa inta uu Qofku u gargaarayo Walaalkiisa Jilicsan, ka aynu ka hadlaynaa Maaha ka ay Masuuliyaddu saaran tahay (Ee Xilka Ummadda haya). Ka ay Masuuliyaddu saaran tahay waa kuwa wata Laanguruusallada Sagaashanka kun, 70-ka kun iyo Lixdanka kun ah, ee Saddexda Jeer la sii kala faa’iido ee Qandaraasyada lagu siiyo Dadka la jecel-yahay, iyadoo waxaasi yihiin Hantida kuwii balan-balaya ee ooyaya.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Marka Aafada Noocan oo kale ahi timaaddo (Abaarta) Kuwa Masuuliyaddu saaran tahay ee ka mid ahaa Mushtamicii Nebigu Abuuray siday yeeli jireen. ? Cumar Binu Khaddaab (RC) ayuu ILAAHAY imtixaanay oo 9 bilood baa Roobkii la waayey, Dadkii Xoolo-dhaqatada ahaa ee Agagaarka Madiina Degganaa oo dhan baa soo guuray, Cumar Binu Khaddaab baa habeenkii baxay oo deraasad soo sameeyay, wuxuu soo arkay Muslimiintii reer Miyiga ahayd oo leeleelaya, mid walbana is-yidhi Amiirka Muuminiinta Cumar Binu Khaddaab u dhawow. Muxuu yeelay Cumar Binu Khaddaab? Markiiba wuxuu soo saaray isagoo naftiisa ka bilaabay, Saddexdiisii Xaas laba ka mid ah ayuu ku yidhi Guryihiina banneeya oo Reerkiina u taga. Ummu Kaltuun oo Rasuulku (CSW) uu Awoow u ahaa wuxuu ku yidhi Gurigaaga iska joog, laakiin waxaad ogaataa in aanan Gurigaaga imanayn, Waayo? ILAAHAY baan kula ballanay in aanaan Gabadh arag illaa uu ILAAHAY Muslimiinta ka feydayo Abaarta. Wuxuu iskugu yeedhay Qoyskiisii, wuxuu ku yidhi ma jiro Qof Reer Cumar ah oo inta Muslimiinta Abaarta ku jirto lagu arki karo Caano, Subag iyo Hilib. Go’aankaa waxa kale oo uu ku dhaqay Hoggaankii sare ee Dadka Muslimiinta ah. Laakiin innagu sidaynu Maanta kaga hor-tagnay Abaarta ? ma in Anigoo ah Wadaad Miskiina inaan idhaahdo Xaalad deg-deg ahbaa la galay-baa ?, ma in Koox Dadka jeceli tidhaahdo Xaalad deg-deg ahbaa la galaybaa.”?
Sheekh Aadan Xaaji Maxamuud Xiirey, wuxuu sheegay oo kale “Intay gaadhayso Maamulka Jira iyo Inta ku xeeran in lala xisaabtamo oo laga soo celiyo Hantidii Ummadda ay ka qaadeen, ta ay Maanta hayaan lagu wareejiyo Dadka Maatida ah markaas ayaynu Talo iyo Xal keenay, ILAAHAY baryadiisa (Innaga Aqbalayaa). Laakiin inta aynu ku jirno Riyada iyo Weftigii Hebel baa Ingiriiska tagay oo intaas oo boqol oo kun baa baxday maynaan keenin Taladii Ummaddu kaga baxaysay (Abaarta)…”ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray, “Dalkan waxa jebiyey qaar aa idinku (Shacabku) soo saarteen, Magacyo u samayseen oo aad Libaaxyo ka dhigteen, laakiin Maanta Dalka halkaa dhigay, Rejana aanay ka soo muuqanin, waxaynu u baahan nahay in Caqligu shaqeeyo, Iimaankuna shaqeeyo, Wanaagguna shaqeeyo si ay ugu Gurmanno Ummaddeena.”
Sheekhu wuxuu Talooyin u soo jeediyey Xukuumadda Somaliland, “Xukuumadda waxaanu kula talinaynaa Waar ha idinka muuqato in Xaalad Deg-deg ahi jirto oo Hab-dhaqankiina wax ka beddela. Inta aad Toban Laanguruusal is-daba gelinaysaan, inta la yaqaanno Salladihiina inta ku baxda, inta la yaqaanno Carruurtiina waxaad ku bixinaysaan, inta la yaqaanno Kulamada aad samaysaan ee Cid lagu amaano kharashka ku baxa, iska daa’ inaynu wax korodhsannee khasaare ayaynu ku jirnaa Aakhiro iyo Adduunkaba.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey oo uu baaq u diray Dadweynaha, “Xukuumaddaa aad ogtihiin siday u dhaqanto iyo siday u isticmaasho Hantida Ummadda waar yaynaan Dadkeenna ku halleynin, haddaynu kaashanno Hantida aynu haysanno iyo Iimaankeenna dadkeena waynu bedbaadin karnaa.”